Jesosy Kristy, Andriamanitra sady olona
"Kristy, Izay ambonin’izy rehetra, Andriamanitra isaorana mandrakizay." Romana 9:5
"Fa iray no Andriamanitra, ary iray no Mpanalalana amin’Andriamanitra sy ny olona, dia Kristy Jesosy." 1 Timoty 2:5
“Izaho ankehitriny dia Ilay Izaho teo aloha ihany
Tsy Izaho teo aloha no Ilay Izaho ankehitriny.
Sady antsoina hoe Andriamanitra Aho, no antsoina koa hoe olona.”
(Takelaka iray tamin’ny teny latina, tamin’ny taonjato voalohany)
— “Izaho ankehitriny dia Ilay Izaho teo aloha ihany.”
Ilay Andriamanitra tsy miova irery ihany no afaka manao fanambarana toy izany. Ao amin’ny fizarana voalohany amin’ny Baiboly Izy dia manao fanambarana mbola manaitra kokoa, hoe : “Izaho, Izay Izy hatrizay hatrizay ka ho mandrakizay” (Eksodosy 3:14). Izy no Jehovah, Ilay Izy hatrizay hatrizay ka ho mandrakizay, Ilay tsy miova. Masina mandrakizay Izy, ary tsy mandefitra na oviana na oviana amin’ny faharatsiana. Nefa fitiavana mandrakizay koa Izy. Miantefa amintsika tsirairay ny fitiavany. Tian’Andriamanitra ny olona, na dia manohitra Azy lalandava aza.
— “Tsy Izaho teo aloha no Ilay Izaho ankehitriny.”
Andriamanitra mandrakizay Jesosy, nanjary olona, na dia tsy izany aza Izy taloha. Nahoana moa ? Noho ny ratsy nataon’ny olona, dia nanonona didim-pitsarana fanamelohana azy ireo ho faty Ilay Andriamanitra masina. Nanota ny olona ; voaheloka izy. Izany toejavatra mampahonena indrindra izany no nanosika Ilay Zanak’Andriamanitra hanjary “Kristy Jesosy, Izay olona” (1 Timoty 2:5), mba hitondra amin’ny tenany ny famaizana sahaza antsika.
— “Sady antsoina hoe Andriamanitra Aho, no antsoina koa hoe olona.”
Jesosy Kristy dia sady Andriamanitra no olona. Andriamanitra hatrizay hatrizay Izy, ary nanjary olombelona, nanomboka tamin’ny nahaterahany tao Betlehema. Ary toy izany hatrany Izy, izao niverina any amin’ny Rainy izao. Nandray Ilay olona lavorary ny lanitra, porofo izany fa horaisiny koa ireo rehetra izay novan’i Jesosy ho lavorary, noho ny sorona nataony teo amin’ny hazofijaliana.